Idi China SAG/AG/Ball/Rod Milling Rubber Liners factory na suppliers |Arex
Ihe mkpuchi rọba na-eji nwayọọ nwayọọ na-edochi ígwè ígwè manganese.Ọ nwere ike inwe mmetụta siri ike nke nguzogide.Mkpụrụ nke sekit egweri gị na-adabere nke ukwuu na eriri rọba igwe igwe gị.Họrọ aka nri nke onye na-ebubata ihe mkpuchi rọba nke ọma ga-ahụ na usoro igwe nri gị na-aga n'ike na ịdị ya kacha.
Ihe mkpuchi roba na-adịkarị mma maka ịkwanye mmiri mmiri, okpomọkụ adịghị elu karịa ogo 80 nke ọrụ nkịtị, ma maka ikpo ọkụ ọkụ dị elu, acid siri ike na Alkali resistance, mmanụ na-eguzogide ọgwụ na ebe ndị ọzọ pụrụ iche, ọ dị mkpa ka a kọwaa ya n'ọdịnihu site na iche iche. usoro nhazi na omenala mere, na mgbakwunye, a ghaghị itinye usoro nchekwa ahụ n'ime ụlọ kwesịrị ekwesị, ọ na-ezube ihe mkpuchi roba iji gbochie ikpughe n'èzí n'okpuru okpomọkụ dị elu na mmiri ozuzo.
Dịka ebumnuche a si dị, a na-ekewa eriri rọba na: AG, SAG, bọọlụ, okwute okwute, mkpanaka & batch Mills, FGD, SMD na igwe igwe na-aga n'ihu.
Dị ka udi, ọ na-ekewa n'ime oke ibu ụdị, grid ụdị na multi-bin ụdị, nke nwere ike izute chọrọ nke otu-ogbo siri ike egweri na abụọ-ogbo ezi egweri.
Anyị nwere ike hazie ụdị ọ bụla nke ihe mkpuchi rọba dị elu na nke na-eguzogide ike dị ka mkpa onye ahịa ọ bụla si dị.
1. Obere ike oriri
2. Akwa mkpuchi mkpuchi
3. Nlekọta dị ala
4. Mmetụta mmetụta
5. Obere mkpọtụ
6. Dị mfe iji wụnye
7. Corrosion eguzogide
8. Ịchekwa bọọlụ ígwè
① Ogwe ndị na-ebuli elu
Ogwe ndị na-ebuli elu dị n'ụdị obosara, ịdị elu na rọba ma ọ bụ profaịlụ agwakọta.Ezubere Ogwe ndị na-ebuli elu na-etinye ntinye nchara iji nye mmetụta kachasị na nguzogide abrasion.
② Njuputa & Akụkụ akụkụ
Emebere akụkụ ndochi na nkuku iji kpọchie efere isi na efere grate n'ọnọdụ ma kwụsị ịgba ọsọ ihe n'akụkụ.
③ Isi efere
Efere Isi Rubber dị n'ụdị dị iche iche iji luso abrasion ọgụ ọgụ.Emebere efere isi ka ọ dị mfe ntinye na njikwa
④ Efere efere
Nhazi efere dị arọ dị maka igwe igwe buru ibu.Ihe na-agbanwe agbanwe nke rọba na-enye ohere maka oghere dị nta karịa nchara nchara ka ọ na-ewepụ nsogbu ndị kpuru ìsì.Dị n'ọtụtụ oghere oghere.
⑤ Center Cones & Trunion&Mgbịrịgba Ọnụ Liners
Enwere ike ịhazi Cones Center na ngalaba maka ịdị mfe nke nrụnye.
Trunion&Mkpọ ọnụ Liners
A na-esi na nchara arụpụtara arụ ọrụ, nke a na-etinyezi rọba.A na-ejikwa eriri rọba na-esighi ike na-arụ ọrụ n'ime akwa Trunnion na mgbịrịgba ọnụ.
⑥ Mpụga Pulp Lifters
⑦ Ndị na-ebuli ihe dị n'ime
A na-emepụta ihe ndị na-ebuli elu rọba ka ọ na-ewepụta mpụta nke ọma nke pulp site na igwe igwe iji wedata olu karama.
⑧ Efere Shell
Ọkpụrụkpụ nke efere shei nwere ike ịdịgasị iche iji bulie ikike igwe nri na/ma ọ bụ ndụ liner.Emebere obosara ahụ maka nchebe kacha mma site na ogwe ndị na-ebuli elu.
Ndekọ Njirimara anụ ahụ
Arụmọrụ Nkeji Index
Na-agbaji ike MPa ≥ 18
Elongation na ezumike %≥ 420
300% nke nrụgide mgbe niile MPa ≥ 12
Isi ike Shore A(degree) 64-68
Mmetụta elasticity %≥ 45
Ịdọka nrụrụ na-adịgide adịgide %≥ 10
The adhesion nke roba na metal KN/m 6
Ụbọchị niile bụ nke ọkọlọtọ nkịtị yana nyocha ụlọ ọrụ iji nweta nhazi pụrụ iche.
Nke gara aga: Sistemụ nyocha nke polyurethane
Osote: Akụkụ mgbapụta LR Slurry
45 Mil Epdm roba ọdọ mmiri Liner
Ute rọba Maka ahụ a na-ekpofu ụgbọ ala
© Nwebiisinka 20102021: Ikike niile echekwabara.> Valve Control Pneumatic Njikọ Mgbasa Ọla Njikọ Mgbasawanye Seismic 50mm roba hose naagbanwe agbanwe Valve mmanụ ihe mmịfe Ntupu ihuenyo Ngwaahịa niile